29 / 08 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 424 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Black က Panther, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒိုမီလာဂျေ, Kraglin, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, Nebula, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, Wakanda, ယွန်ဒူး
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့ကပထမဆုံးလွှတ်ပေးတော့မည် Marvel စုဆောင်းနိုင်သော Minifigure ဇာတ်လမ်းတွဲ၊ သို့သော် T'Challa Star-Lord ဟုလူသိများသောဤအခြားတရားမ ၀ င်သူကားမည်သူနည်း။
Missouri မှ Peter Quill ကဲ့သို့ဒဏ္legendaryာရီဆန်သောတရားမ ၀ င်သောတရားမ ၀ င် Star-Lord ကိုလူအများသိကြလိမ့်မည်၊ Yondu ၏သင်္ဘောသည် Wakanda အစား Wakanda သို့သွားလျှင်ဘာဖြစ်မလဲဟုမေးရန်ရဲရင့်သည်။
လာမည့်ဇာတ်ကောင်အပိုင်းအခြား 71031 Marvel စတူဒီယို မျိုးစုံကိုကျယ်ပြန့်သည် Marvel Cinematic Universe သည်၎င်း၏ minifigures များအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်များကိုတစ်ခွန်းတည်းပြန်ပြောပြခြင်းအပါအ ၀ င်အဓိကလှည့်ကွက်များအပါအ ၀ င်။ ဒုတိယမြောက်ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် spoilers များလိုက်လာလိမ့်မည်ဆိုသည်ကိုသတိပြုသင့်သည် Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? နှင့် Guardians of the Galaxy Vol ။ ၂ ။
အစားထိုးတင်ပြသောအချိန်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် Marvelအသစ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ ... Ravagers ဇာတ်လမ်းတွဲများသည် Celestial Ego မှကလေးရှာဖွေရေးတာဝန်ကိုပေးအပ်ခဲ့သေးသည်၊ သို့သော် Wakanda ၏ Vibranium of Vibranium ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောထူးဆန်းသောဖတ်စရာများစွာကြောင့် Kraglin သည်သူတို့ရှာဖွေနေသည့် Celestial ကလေးတစ် ဦး ကိုမင်းသား T'Challa ဟုထင်ခဲ့သည်။ မရ။
သူတို့၏အမှားကိုဖော်ထုတ်လိုက်သောအခါ Yondu သည် Peter Quill ကိုလုံး ၀ မရှာဖွေဘဲလူငယ် T'Challa ၏ဆန္ဒအတိုင်းသူ၏အလုပ်သင်အသစ်အားပိုမိုကျယ်ပြန့်သော galaxy ကိုပြသရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသော် T'Challa သည်သူ၏ရဲရင့်မှုနှင့်ခိုင်မာမှုတို့ကြောင့်စကြဝာကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသူ၏အဖေသည်ပြန်ပေးဆွဲခံရသောသားကိုရှာဖွေရန်စတင်လိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် T'Challa သည်သူ၏ဇာတိနိုင်ငံကို Yondu ကအစီရင်ခံသည့်အတိုင်းဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။
လာမည့်အနှစ် ၂၀ ကျော်တွင် T'Challa သည် Star-Lord ၏အခန်းကဏ္ကိုလက်ခံခဲ့သော်လည်း Peter Quill အတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုများရှိခဲ့သည်။ အကြီးအကျယ်ကိုယ်ကျိုးရှာဘဝခိုးကူးခြင်းနှင့်နဂါးငွေ့တန်းကိုစူးစမ်းရှာဖွေမည့်အစား Wakandan သည်ခိုးယူခြင်းဖြင့်ခြားနားချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ artဂြိုလ်များကိုကယ်တင်ရန်သို့မဟုတ်ဟန်ချက်ညီရန်သူ၏ရှာဖွေမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန် Mad Titan အချို့အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးအတွက်သူ၏များစွာသော Quest များထဲမှတစ်ခုသည်သူ့ကို intergalactic စစ်ဘုရင်အသစ် The Collector ၏လမ်းကြောင်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ Thanos ၏အခန်းကဏ္takenကို ယူ၍ စွဲမက်သောဤပုံသည်အမျိုးမျိုးသောမျိုးစိတ်များကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့် E မှအရာများယူခြင်းပင်ဖြစ်သည်arth ရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးသူရဲကောင်းများ T'Challa Star-Lord သည်ရဲရင့်သောဓားပြတိုက်မှုနှင့်အတူ T'Challa Star-Lord သည်တစ်ချိန်က Dora Milaje ၏အဖွဲ့ဝင်များဖြင့်လည်ပတ်ခဲ့သောအာကာသယာဉ် Wakandan သင်္ဘောကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
T'Challa သည်သူ၏အိမ်မှတစ် ဦး တည်းသောအမှတ်တရဖြစ်သောကြောင့်သင်္ဘောကိုဖွင့ ်၍ T'Challa သည် Wakanda ၏အမှန်တရားနှင့်သူ့အားရှာဖွေခဲ့သည်။ ဒါကနောက်ဆုံးသူက T'Challa ကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးလို့ဝန်ခံခဲ့တဲ့ Yondu ကိုသူနဲ့သူနဲ့ MCU timeline မှာအခြား Star-Lord တို့ကြားကတူညီတဲ့ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုပါ။
Thanos, Nebula, Kraglin, Taserface နှင့် Yondu တို့၏အကူအညီဖြင့် T'Challa သည်အဖွဲ့အားအောင်ပွဲခံစေပြီးသေစေသောကမ္ဘာမြေကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ပွင့်လန်းလာစေနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သော The Collector's clutches မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
ဤအထူးသဖြင့်သူရဲကောင်းဇာတ်ကောင်ကိုကိုယ်စားပြုရန်အသုံးပြုသော minifigure သည်၎င်းရှိနေလျှင်ပင်စစ်မှန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာရှိသည် လည်ဆွဲအချို့ပျောက်ဆုံးသည်မရ။ ၎င်းသည် Chadwick Boseman အားသင့်လျော်သောလက်ဆောင်အဖြစ်နှင့် Star-Lord ၏အခြားအချိန်ပြဗားရှင်း၏စစ်မှန်သောကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်ရပ်တည်ရန်စီမံနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျန် minifigures များအကြောင်းကိုသင်ပိုမိုသိနိုင်သည် 71031 Marvel စတူဒီယို ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်းပြချက်ဗီဒီယိုတွင်အပေါ်တွင်မြှုပ်ထားသည်။
တနည်းအားဖြင့်ငါတို့မှာလေးနက်မှုရှိတယ် artမကြာခင်မှာလမ်းပေါ်မှာနောက်ထပ်အတူအခြား minifigures များရွေးချယ်ခြင်းအတွက် icles minifigure တစ်ခုစီကိုတစ်ပြိုင်နက်လျင်မြန်စွာကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လည်းရှိသည် အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ် တစ်ခုလုံးအတွက် 71031 Marvel စတူဒီယို သင်တွင်းထဲသို့ဝင်ရန် ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပါ Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် ဖြန့်ဝေလမ်းညွှန်.
T'Challa Star-Lord နှင့်အခြား minifigures ၁၁ ခုကို p အဖြစ်ရရှိလိမ့်မည်art of 71031 Marvel စတူဒီယို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်၍ အွန်လိုင်းနှင့်စတိုးဆိုင်များတွင်£ ၃.၄၉ / ဒေါ်လာ ၄.၉၉ / € ၃.၉၉
← နောက်ထပ် LEGO တစ်ခုအချိန်ရောက်နေပြီ Ideas ပရောဂျက်ကိုထောက်ခံသူ ၁၀ သိန်းပြည့်သွားပါပြီ
LEGO ၏အနာဂတ်ဖြစ်သည် Jurassic World မြို့ပြတွေအများကြီးပိုသတ်မှတ်ပေးမလား။ →